Maraykanka oo dib ufasaxay taageerida Ciidamada Somaliya – Idil News
Maraykanka oo dib ufasaxay taageerida Ciidamada Somaliya
Posted By: Jibril Qoobey February 12, 2020
Maraykanku waxuu dib ufasaxay dhaqaalihii uu ku taageeri jiray Ciidamada Somaliya.
Dib ufasixidan waxay ku kooban tahay Ciidamada sida tooska ah dagaalka ugula jira Alshabaab.
Taasi waxay ka macno tahay in Sadex Ciidan oo qura ay heli doonaan taageerada Maraykanka,kuwaasoo kala ah…
Waxaa meesha ka baxay Maleeshiyaadkii Dowlada Fadaraalku ku dhaqaale qaadan jirtay ee aan qaybta ka ahayn la dagaalanka argagixisada.
Go’aanka Maraykanka waxaa ku xiran shuruud oranaysa in Dowlada Dhexe iyo Dowladaha xubnaha ka ah ay ku heshiiyaan marka hore Ciidamada la taageerayo.
Taasi waxay muujinaysaa sida Maraykanku uga aamin baxay Dowlada Dhexe ee Somaliya.
Go’aankan waxuu kusoo aadayaa,iyadoo wafti sare oo Maraykanka ka socda uu soo gaaray Kismaayo.
Sidoo kale go’aanku waxuu jawaab u yahay baaqii Madaxweyne Deni ee ahaa in caalamku dib uga fiirsado taageerida uu siiyo Ciidamada Dowlada Dhexe ee sida khaldan loo adeegsaday….
“The United States resumed providing direct security assistance to a non-mentored unit of the Somali National Armed Forces (SNAF) this week in support of counterterrorism operations in Lower Shabelle against al Shabaab.